Bruny Boathouse - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSophie
I-Bruny Boathouse ibekwe kumda wamanzi kunye nemibono yepanoramic ngapha kwe-Entrecasteaux Channel, iSatellite Island kunye neNtaba yeHartz exhaswe ngasemva. Ibekwe kwindawo esembindini kwilokishi yaseAlonnah kwicala elingasentshona leSiqithi saseBruny, iBoathouse yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzisekela kuyo yonke into enokwenziwa nguBruny. Nangona kunjalo, kukunika inkululeko yokufuna ixesha lokuphuma.
Silandele kwintlalontle @brunyboathouse ngohlaziyo rhoqo kwindawo kunye nendawo.
I-Boathouse iwafanele onke amaxesha onyaka, hlala phezulu kwidesika kwiinyanga ezifudumeleyo kwaye ubukele iiyacht zityibilika, intlanzi ekhwele inqanawa, ukuqubha kulwandle olunobungane kubantwana okanye uqokelele amaqokobhe ukusuka eShell Beach ezantsi ngaphambi kwepropathi. Kwiinyanga ezipholileyo hlala ecaleni kwefestile enesisa kwaye ubukele imozulu ijika ijika ulwandle njengoko ungena kwikona esecaleni yeBruny Boathouse.
Iyilwe malunga nomxholo we-boathouse, ukusukela oko uvula ucango ubuliswa yisilingi ephezulu yecathedral ethi itsalele iliso lakho ngaphaya kweyona ndawo iphambili yokuhlala ukuya kwiingcango ezimangalisayo ezivuleleke ngqo ukuya kumgangatho wokuthatha umbono omangalisayo wepanorama. ngaphesheya kwe-Entrecasteaux Channel.
Eli tyotyombe litofotofo linamagumbi okulala ama-2 kwaye lingalala ukuya kutsho kubantu aba-4 abaneebhedi zonke ezigqunywe kwi-french linen linen doonas kunye nemiqamelo, amashiti omqhaphu amatsha anomatrasi aqinileyo anconywa ngamafu athambileyo oomatrasi kunye nebhedi eqinisekisa ukuba ulala obona mphuphi. Igumbi lokulala eli-1 ibhedi yokumkanikazi kunye negumbi lokulala eli-2 ibhedi yenkosi (kunye nokukhetha ukwahlula kwii-singles ezi-2 ngesicelo). Onke amagumbi okulala akhiwe ngeengubo zokuqinisekisa ukuba imithwalo yakho kunye nezinto zakho zigcinwe ngokukhuselekileyo.
Igumbi lokuhlambela nangona lilula, alidanisi- ukuqhayisa ngeesepha ezenziwe ngeTasmanian zasekhaya, ukuhlamba umzimba, ishampu kunye ne-conditioner kaLentara Grove eya kukhanyisela iimvakalelo zakho ngelixa uhlamba.
Ikhitshi langoku liqhayisa ngazo zonke izinto eziluncedo ezifana nefriji, itoaster, iketile, umatshini we-nespresso pod, i-microwave kunye nesitovu se-smeg kunye ne-cooktop ukuqinisekisa ukuba ungalungisa zonke izidlo ngokukhululeka nangokulula. Sinikezela nge-pantry elula yokuthotyelwa kwe-muesli, i-pasta, ioli yeoli, ityuwa kunye nepepper, iswekile, iti, ikofu egayiweyo kunye neepods zekofu kwiindwendwe. Ngezinto ezinkulu sikukhuthaza ukuba ungene kwivenkile enkulu eHobart ukuze ufumane isitokhwe kuwo nawaphi na amalungiselelo afana nobisi, isonka kunye nazo naziphi na ezinye izinto eziyolisayo zetassie onokufuna ukuzipheka eBoathouse. Nangona uAlonnah enevenkile egcweleyo egcweleyo ivula yonke imihla kude kube ngu-4pm.
Ifenitshala kunye nezangaphakathi zifunyenwe ngononophelo ukuze kuqinisekiswe ukuba eli tyotyombe lihlala kweyona nto ilungileyo - amaplanga amahle, amalaphu, ilinen kunye nomsebenzi wobugcisa odala imvakalelo yokutsala umtsalane wangaphantsi ngaphandle kokuphikiswana - ungayonwabela yonke intuthuzelo ebonelelwa yiBruny Boathouse. , kodwa ugxininise ngokwenene kwizinto ezibalulekileyo ezifana neentsuku ezinde elunxwemeni, ukuhamba kwisiqithi kunye nabahlobo bethatha zonke iindawo ezimangalisayo kunye neendawo ezintle, ukutya kuzo zonke iindawo zokutyela kunye neekhefi eBruny Island, isampuli zewhisky zendawo, iibhiya kunye newayini kunye nje. ukulibala malunga nenyani okwethutyana.
Buyela kumgodi womlilo ubusuku bonke phantsi kweenkwenkwezi okanye iimvakwemini ezinde kwindawo yokuhlala ubambe iVithamin D.
Ukuba awukhethi cala kwi-adventure ke iBruny Island ayizukuphoxa- sicebisa ukuba ucwangcise iintsuku zakho kwangaphambili ukuze uqinisekise ukuba uphumeza kangangoko unakho xa ukhenketha esi siqithi.
Zonke iifoto zikaMarnie Hawson ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela.
4.98 · Izimvo eziyi-184
IAlonnah yilokishi engundoqo kwicala elingasentshona leSiqithi saseBruny, esiphahlwe yiD'Entrecasteaux Channel entle. I-Boathouse yindlela elula yokuhamba nge-1km ukuya kwindawo yokushicilela kuphela kwesi siqithi- iBruny Island Hotel, ivenkile ngokubanzi kunye nekhemesti. Ukwangumzuzwana nje wokuhamba uye kolona lwandle lukhuselekileyo lwabantwana lokuqubha esiqithini.
I-Alonnah kunye ne-boathouse yindawo esembindini yokuzibeka kwindawo yokubona iisayithi ezinokuthi uBruny anikezele ngazo.
Sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo xa zihlala eBoathouse kwaye kukho ibhokisi yokutshixa kwindawo enezitshixo zokufikelela kwipropathi. Nangona kunjalo, ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo ngelixa uhlala, sihlala sikhona kwaye sinomphathi wepropathi kule ndawo ukukunceda ngeemfuno zakho.
Sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo xa zihlala eBoathouse kwaye kukho ibhokisi yokutshixa kwindawo enezitshixo zokufikelela kwipropathi. Nangona kunjalo, ukuba…